जांघ उच्च जूता संगठन - कसरी छलफल गर्ने जांघ उच्च जुत्ता पोशाक
जांघ उच्च जुत्ता पोशाक
जीवन शैली , उच्च जूता
महनूरफाटीमा जनवरी ४, २०२१, २:१२ बजे #१
वास्तविक कुरा जबकि जांघ-उच्च जूताहरु पनि डिजाइनरहरु, फेसन केटीहरु, र महिलाहरु लाई जताततै एक प्रशंसक मनपर्ने हुन सक्छ, उनीहरु ठीक लगाउन सजिलो छैन।
जांघ उच्च जुत्ता पोशाक 480 × 720
जांघ-उच्च बुट पोशाक विचारहरु संग आउँदै एक विस्तारित दिन को शीर्ष मा उनीहरु लाई फिसल को रूप मा कर लगाउन को रूप मा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। उल्लेख गर्न को लागी जब उनीहरु "म मा कदम" भावनाहरु लाई उजागर हुनेछन्, उनीहरु ठ्याक्कै सबै भन्दा सजिलो जुत्ताहरु मा तपाइँ को कदमहरु मा आग्रह गर्न को लागी यदि तपाइँ मेरो बहाव समात्नुहुन्न।
घुँडा अग्लो जुत्ता
best-over-the-knee-boots) लोकप्रियता मा बृद्धि भएको छ, यो मात्र तपाइँको समय को एक जांघ-उच्च जूता इन्च अप भन्दा पहिले को कुरा हो।
यदि तपाइँ त्यो अन्तिम वाक्य पढ्न को लागी आगत अस्तित्व को डर भेट्टाउनुभयो, हामी तपाइँलाई यो भरोसा गर्न को लागी नजिक छ कि जांघ-उच्च जूताहरु लाई वास्तव मा शैली को लागी गाह्रो छैन।
तत्काल को सबै भन्दा सरल जांघ-उच्च बुट संगठनहरु डुप्लिकेट गर्न र अघिल्लो सिजनहरु को तुलना मा सजीलो सजीलो छन्-तपाइँ मात्र तपाइँको लागी पनी स्क्रोल गर्न को लागी राख्न को लागी आवश्यक छ।
कसरी स्मार्ट र जांघ-उच्च जूता मा उत्तम दर्जेको हेर्न
चाहे तपाइँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, एक मिति मा अन्यथा तपाइँ कार्यालय को लागी तपाइँको जांघ- highs शैली गर्न चाहानुहुन्छ, त्यहाँ केहि चालहरु तपाइँ जान्नु पर्छ यदि तपाइँ स्मार्ट र उत्तम दर्जेको लाग्न चाहानुहुन्छ। हामीले उनीहरुलाई तपाइँको लागी कभर गरेका छौं।
तपाइँको लुगा अनफ्लटरिंग राख्नुहोस्
यो जरूरी केहि गलत को मतलब छैन। तपाईं आफ्नो लुगा ढीला रहन चाहानुहुन्छ - त्यसैले धेरै तंग र stretchy छैन।
जांघ-उच्च जूता सबै वा कुनै तपाइँको संगठनहरु को लागी कामुकता को एक खुराक जोड्नुहोस् त्यसैले यो सबै bodycon पोशाक बाट बच्न को लागी एक समझदार विचार हुन सक्छ। यसको सट्टा, केहि ठूलो आकार, एक स्वेटर वा जम्पर को एक आदर्श सन्तुलन बनाउन को लागी पहने कोसिस गर्नुहोस्।
Skinnies, leggings, वा चड्डी संग तपाइँको जुत्ता लेयर गरेर, तपाइँ शीर्ष मा भोल्युम को लागी ठाउँ बनाइरहनुभएको छ। मोनोक्रोमैटिक जानुहोस्
तपाइँको जांघ-उच्च जुत्ता मा मिश्रण मात्र तपाइँको रूप मा एक उच्च फैशन Vibe थप्न छैन, तर यो तुरुन्तै अग्रणी फैशनेबल व्यक्ति तुरुन्तै पहिरन मोनोक्रोमैटिक लुक्स लगाउन को लागी सामान्यतया राम्रो हुन्छ यदि तपाइँ टाढा बाट ध्यान आकर्षित गर्न चाहानुहुन्छ। जूता आफैं र तपाइँको पुरा रूप मा स्थानान्तरण।
जांघ-उच्च मोजा कोसिस गर्नुहोस्
पहिले भन्दा धेरै घुँडाको जुत्ता लगाउने बारे मा सोचनु भन्दा पहिले, तपाइँ आफैलाई चड्डी र लामो जूता कम्बो लगाएर प्रयास गर्नुहुनेछ।
* छोटो र लामो संयोजन
लामो जाडो कोट तपाइँको सबैभन्दा राम्रो सहयोगी हुन जाँदैछ जब यो जांघ-उच्च जूता संग उनीहरु को संयोजन मा शामिल छ। तपाइँ छोटो स्कर्ट संग काम गर्नुहुनेछ, छाला को एक अत्यधिक मात्रा देखीएको बिना। साथै, चीजहरुको यो मिश्रण तपाइँ न्यानो राख्नुहुनेछ। खैर, त्यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन?
* क्लासिक सामाग्री को लागी जानुहोस्
डेनिम जांघ-उच्च जुत्ता को बारे मा बिर्सनुहोस् कि रिहानाले लगाएको थियो। कालो वा खैरो छाला वा साबर - फरक रंग र सामाग्री संग प्रयोग गर्नुको सट्टा, क्लासिक छान्नुहोस्। पुष्टि गर्नुहोस् कि ती साबरहरु एक पन्जा को आफ्नो खुट्टा प्रकार सूट।
कस्ता लुगाहरु लामो जुत्ता संग राम्रो लगाएको देखिन्छ?
वास्तव मा, धेरै धेरै संगठनहरु जांघ-उच्च जूता गाइड/जाडो-उच्च-जूता संग जाडो-पोशाकहरु संग राम्रो देखिन्छ)। त्यहाँ केहि तरिकाहरु तपाइँ तपाइँको प्यारा जूताहरु तपाइँको दैनिक कैप्सूल वार्डरोब मा शामिल गर्नुहुनेछ।
चाहे तपाइँ एक संक्षिप्त स्कर्ट, midi पोशाक वा स्कीनी जीन्स संग तपाइँको जांघ-उच्च जूता शैली चयन गर्नुहोस्, तपाइँ आकर्षक र फैशनेबल देख्नुहुनेछ। जे होस्, हामी तपाइँलाई केहि चीजहरु को बारे मा चेतावनी दिनु पर्छ।
धेरै चमकदार केहि नलगाउन कोसिस गर्नुहोस्। जुन तपाइँको जुत्ता मा ध्यान को टन ल्याउनेछ, र तपाइँको पोशाक सामान्यतया छैन। को रूप मा तपाइँ को रूप मा अधिकतम राशि उत्तम दर्जे हुन को लागी प्रयास गर्नुहोस्। जे होस् तपाइँ बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ, मिश्रण र रिमाइन्डर जुत्ता संग तपाइँको कपडा मिलान, र केहि केहि छान्नुहोस्।
D Dos र लामो जुत्ता लगाउने नगर्नुहोस्
लुगा लगाउनुहोस् कि आंशिक रूप मा कभर को एक न्यूनतम छ - उच्च neckline, midi वा maxi लम्बाई, आदि तरीका मा, तपाइँ परिष्कृत हुन को लागी तपाइँको लुक सुरक्षित राख्नुहुनेछ र overdone छैन।
एक हेमलाइन छान्नुहोस् कि तपाइँको जूता को उच्चतम लाई कभर गर्दछ-मिडी लम्बाइ तपाइँको सहयोगी हुनु पर्छ जब जांघ-उच्च जुत्ता लगाउनु पर्छ। एक उत्कृष्ट बोल्ड लुक को लागी तपाइँको काँध मा एक कोट ड्रप गर्नुहोस्।
नगर्नुहोस्: छाला तपाइँको स्कर्ट हेमलाइन र जूताहरु बीच १२ सेन्टीमिटर भन्दा बढि देखाईरहेको छ। कुनै पनि जीवन्त रंग, चमकदार विवरण, र अन्य अनावश्यक चीजहरु - जूता तपाइँको पोशाक को शेष छायाँ गर्न दिनुहोस्।
तपाइँको जुत्ता या त धेरै तंग वा धेरै ढीला लगाउनुहोस्। तपाइँ एक आदर्श फिट खोज्न को लागी पर्वाह नगरी कुन सामग्री बाट जुत्ता बनाइन्छ।
सबै ठीक छ, अब एक पटक तपाइँ सबै गर्न र नगर्ने, र जांघ-उच्च जूता मा स्टाइलिश हुन को बारे मा चालहरु सिकेका छौं, हामी बिभिन्न अवसरहरु को लागी उनीहरुलाई शैली गर्ने तरीका देख्नेछौं।
जांघ-उच्च जुत्ता संगठनहरु बाहिर खोज्न यति गाह्रो छैन-सबै ब्लगरहरु, प्रभावकारहरु, र फैशन सम्पादकहरु उनीहरुलाई मन पराउँछन्!
कसरी एक साँझ मा घुँडा उच्च जूता लगाउन को लागी बाहिर यो एक ककटेल रात एक साथ तपाइँको साथीहरु को साथ मा एक फूल क्लब मा एक साँझ को कल हो, तपाइँलाई चाहिए
यदि यो एक सजिलो पेय र एक कुराकानी हो, तपाइँ केहि ठाडो र आकस्मिक वस्तुहरु, पक्ष जांघ- highs सँगै आफ्नो नजर आधार हुनेछ। यो मिश्रण दुबै आराम र लालित्य संग प्रदान गर्दछ - त्यहाँ भन्दा राम्रो संयोजन छैन!
ड्रेसिंग को स्पोर्टी तरीका शैली उद्योग बाट धेरै केटीहरु को दिल लाई लिएको छ। उनीहरु sweatshirts र पेटेंट-छाला स्कर्ट वा ट्र्याक प्यान्ट र जांघ-उच्च जूता को संयोजन देखीन्छ। एक साँझ बाहिर तपाइँ प्रयोग गर्न को लागी एक शानदार मौका हो। तपाइँ आकर्षक देख्नुहुनेछ, तर यो पनि धेरै फैशनेबल।
सारांश : जांघ जूता प्रभावित सौन्दर्य संस्कृति आज यदि तपाइँ यस जांघ जूता बाट प्रेरणा को चाहना चाहानुहुन्छ उनीहरु मध्ये एक छान्नुहोस् र यो आधुनिक विविधताहरु संग यो अक्सर अझै पनी पुरुष र महिलाहरु बीच लोकप्रिय छ।
के जांघ उच्च जूता रद्दीटोकरी छन्?
जे होस्, त्यो पल पनि हो जहाँ सबै केटीहरु लाई उत्तेजक, रद्दीटोकरी र भल्गर को रूप मा घुँडा मा जूताहरु लाई मानिन्छ। … आश्चर्य को कुरा, जांघ उच्च जूता धेरै बहुमुखी र पहिरन योग्य छन्। तिनीहरू जीन्स, स्कर्ट, र पोशाक संग पूर्णतया काम गर्छन्। तिनीहरूलाई एक दिन, काम, वा सुरुचिपूर्ण पोशाक संग धेरै लगाउन संकोच नगर्नुहोस्।
किन जांघ अग्लो जुत्ता आकर्षक छन्?
जे होस्, उनीहरु प्राय couture डिजाइनरहरु द्वारा बेचेको हो, शायद निहित कामुकता को कारण। लामो खुट्टा भएका महिलाहरुमा जांघ-अग्लो जुत्ताहरु बढी चापलुसी हुन्छन् "तिमी जति छोटो छौ, घुँडाको माथि समाप्त हुने जुत्ता लगाउँदा कम खुट्टा बुटको माथिल्लो भाग भन्दा माथि छ।
के घुँडाको जुत्ता अझै पनी एक ला मोड २०२० हो?
"पतन २०२० रनवेहरु घुँडा-माथिल्लो र घुँडा भन्दा माथी जुत्ता संग crammed थियो, धेरै ब्रान्डहरु को प्रवृत्ति पसल bop's मा एक अपडेटेड दृष्टिकोण लिने संग।
फैशनस्टास यी दिनहरु संग मिरांडा केर, निकोल Scherzinger, र केन्डल जेनर संगै उनीहरुको कामुकता को प्रतीक र अपेक्षित आफ्नो जांघ अत्यधिक जूता हान्न।
जांघ अत्यधिक जूता लगभग प्रत्येक १२ महिना को सिजन मा थिए र त्यस्तै गरी, फिल्म एक व्यक्तिको नयाँ मनपर्ने हरेक बर्ष रहन्छ। धेरै केटी सबै समय को सबैभन्दा ठूलो रोमान्टिक हास्यहरु मध्ये एक हो।
जे होस् उनी आफ्नो राजकुमार आकर्षक भेट्छिन्, भिभियन वार्ड केहि छ तर संकटमा एक युवती। उनी आगन्तुकहरुलाई आफ्नो आत्मविश्वास र समाजको मापदण्ड को अस्वीकार संगै सशक्त बनाउँछिन्। उनी साँचो रहन्छिन् उनी को हुन् र अब यो फिल्म मा पुरुष को लागी व्यापार गर्दैनन्। यो सुन्दर महिला एक साँचो परम्परागत बनाउँछ।
धन्यवाद पोशाक विचार
फोर्टनाइट कहिले बन्द हुन्छ?
शेन लाई वितरण गर्न कति समय लाग्छ?